देश/ विदेशको समाचारः एचकेनेपाल डट कम » लन्डनमा नेपाली कांग्रेस स्थापनाको ६५ औं बार्षिक स्थापना दिवस
लन्डनमा नेपाली कांग्रेस स्थापनाको ६५ औं बार्षिक स्थापना दिवस
शिवलाल भण्डारी / एचकेनेपाल डट कम -
लन्डन, लन्डनमा नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको ६५ औं बार्षिक स्थापना दिवस मनाइएको छ। Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली र शंकर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाइएको हो।
लन्डन फेल्थाममा भएको उक्त कार्यक्रममा वेस्ट लन्डन नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापति सूर्य नेम्वाङको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि केन्द्रीय सदस्य नेपालीले प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र आर्थिक समानताका लागि ६५ वर्षअघि स्वर्गीय वि.पी. कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरेको बताए। उनले नेपाली कांग्रेसले राणा र पञ्चायतलाई परास्त गरेको उल्लेख गर्दै अब देशमा शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्याई देशमा समानता र मेलमिलापलाई कायम राख्ने बताए।
उनले माओवादी अतिवादले गर्दा मुलुकमा संविधान बन्न नसकेको बताउँदै माओवादीले धोकाको राजनीति गरेकाले उसलाई विश्वास गर्न नसकिने बताए। नेपालीले पार्टीभित्र विवाद भएपनि आउँदो चुनावसम्म नेपाली कांग्रेस एक नम्बर पार्टी बन्ने दाबी गरे।
यसैगरी, उनले बेलायत रहेका गोर्खाजहरुको समान पेन्सनको आन्दोलन, दोहोरो नागरिकताको आन्दोलन, विद्यार्थी समस्या, भाषा प्रवर्द्धन र लगानीका लागि नेपाली कांग्रेसले सक्दो सहयोग गर्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै युवा नेता भण्डारीले नेपाली कांग्रेसमा माओवादी सहमति गर्दै र लत्याउँदै गएकाले संविधान र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसेकेको बताए।
यसैगरी, बुद्धिजीवी सम्पूर्णानन्द ढुंगानाले नेपाली कांग्रेसले समाजवाद, लोकतन्त्रको मुल मन्त्र नछाडि नयाँ नेपाल बनाउन जोमिख मोल्नुपर्ने धारणा राखे।
पूर्वसभापति बिनोद मोक्तानले राज्यले राज्य पुनसंरचना तथा संबिधान लेखनमा सबै जना गम्भीर हुनु पर्ने बताए। अर्का बक्ता बुद्धिजीबी शिवजी श्रेष्ठले नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको कमी आएकोमा चिन्ता प्रकट गर्नु भयो।
त्यसगरी, महासमिति सदस्य बिज्ञान प्रसाईले कर्तब्य र अधिकार एक सिक्काका २ पाटा भएको र अधिकार र कर्तब्यको समायोजन नभएकोले (Excessive rights with zero responsibilities) देशको यो दशा भएको बताउनु भयो।
महासमिति सदस्य रवि राईले नेपाली काँग्रेसले परिवर्तनको नेतृत्व लिनु पर्ने बताउनु भयो। कार्यक्रममा युवा नेता युवराज गुरुङ, एकराज नेम्वाङ र युबिजीएनका प्रवक्ता ज्ञानराज राईलेसमेत मन्तब्य राखेका थिए।
कार्यक्रममा नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापति लोक गुरुङले छोटै समयमा पनि कार्यक्रम आयोजना गर्न सकेकोमा जनसम्पर्क समिति वेस्ट लन्डनलाई धन्यवाद दिए।
कार्यक्रममा स्वागत वेस्ट लन्डन जनसम्पर्क समितिका उपसभापति शिव भण्डारीले आगन्तुक सबैलाई स्वागत मन्तब्य दिएका थिए।
पूर्व महामन्त्री राजकुमार त्रिपाठीले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा साउथ इस्टका सभापति मोती भण्डारी, सल्लाहकार दुर्गा पाण्डेय, वेस्ट लन्डनका उपसभापति बाबुराम प्रधान, चिन्तन पौडेल, प्रवेश केसी, डा. विजन पन्त, राज सिटौला, केन्द्रीय उपसभापति भीम राई, कलाकार संघका सभापति उमेश मोक्तान, मधेश एसोसिएसनका भाग्यनारायण शाह, दिलीप महासेठ, राजु पाठक, सुभाष पोखरेल, विश्व घिमिरे, सन्तोष उप्रेती, एसइ युके केन्टका उपसभापति रणवीर योङहाङ, हाउनसोलो गोर्खा कम्युनिटीका राम थापा, नेका पूर्व पिदिम सभापति मोहन नेम्वाङ, रामेछापका पूर्व क्षेत्रीय सभापति किशोर सुनुवार, नेका खोटाङ पूर्व सचिव वागवीर राई, गोर्खा हृयुमन राइटस् श्रीमती बबी बासिङ, भुवन सिंह गुरुङ, गोर्खा कम्युनिटीका प्रकाश गुरुङलगायका ब्यक्तिहरुको उपस्थिती रहेको थियो।